Kanzuru yeHarare Inoti Hurumende Iri Kutora Zvipatara Zvayo Asi Isiri Kuzvisimudzira
Kubvumbi 23, 2020
Chipatara cheWilkins muHarare
Kunyange hazvo hurumennde yakazivisa kuti yave kumotora zvipatara zvekanzuru yeHarare zvinorapa zvirwere zvekutapuriranwa zveWilkins Hospital neBeatrice Infectious Hospital kuitira kurwisa chirwere cheCoronavirus, kanzuru inoti haisati yapihwa mari inosvika mamiriyoni masere yekuAmerica yakavimbisa nehurumende kusimudszira mabasa pazvipatara izvi.
Meya weguta reHarare, VaHerbert Gomba, vakatonokumbira muzinda weChina muZimbabwe kuti uvabatsire kugadzirisa zvivakwa rinova basa rakapera.
Makambani nevamwe vanhu vari kukabatsirawo nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana kuti zvipatara izvi zvishande zvakanka sezvinotarisrwa nebazi reunited Nations rinoona nezvehutano reWorld Health Organization rinokurudzira kuti pave nezvipatara zvakakwana zvekurapa vane coronavirus hurumende isati yati vanhu ngavadzokere kumabasa.
Gweta rinombomirira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, riri nhengo yeZanu-PF, VaTinomudaishe Chinyoka, vanoti danho rehurumende rakanaka chose sezvo richibatsira kusimbaradza nyaya yekurwisa chirwere cheCoronavirus nehutungamiri hwakajeka.
Asi mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC, VaClifford Hlatywayo, vanoti hurumende iri kungotora zvipatara zvekanzuru iyo yatadza kugadzira zvipatara zvehurumende.
Hurukuro naVaClifford Hlatywayo naVaTinomudaishe Chinyoka
Zimbabwe, Botswana neSouth Africa Dzotarisira Kusainirana Chibvumirano Chekuchengetedzwa kweMhuka
Kucherwa kweGoridhe Zviri Kunze kweMutemo kuPenhalonga Kwokanganisa Magariro eDunhu iri
Mutewedzeri weMutungamiri weMDC Alliance, VaTendai Biti, Vanosungwa Vachipomerwa Mhosva Yekutuka Mumwe Mudzimai
Vanhu Vatatu Vanoshaya neCovid-19, Vamwe Zana neMakumi Masere neMumwe Vachibatwa Chirwere Ichi
Hurumende Yokurudzirwa Kuremekedza Kodzero dzeVanhu